Redmi Pro 2: avo lenta ofisialy ny marika avo lenta | Androidsis
Sivana ilay heverina ho Redmi Pro 2 amin'ny marika sinoa
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia voamarina fa nikasa ny hanangana maodely avo lenta i Redmi, Hampiasa Snapdragon 855 aho amin'ny maha-processeur anao. Na dia tsy nisy antsipiriany manokana nomena momba ity fitaovana ity aza. Saingy ny orinasa mihitsy, miaraka amin'ny filoha lefiny, no niandraikitra izany hamafiso fa miasa amin'ilay maodely voalaza izy ireo. Telefaona iray efa tafaporitsaka izao, toa ny Redmi Pro 2.
Tao anatin'ny ora farany dia tafaporitsaka ny antsipiriany voalohany momba ity telefaona marika marika sinoa ity. Ny Redmi Pro 2 dia lasa ilay maodely voalohany ao anatin'ny faritra avo lenta ho an'ity marika vaovao ity. Manana ny endriny izahay, araka ny hitanao amin'ny sary, miampy antsipiriany momba izany.
Azontsika atao ny mahita fa ity Redmi Pro 2 ity dia manolo-tena amin'ny famolavolana izay hitantsika betsaka amin'ny Android amin'ity herinandro ity. Satria miloka amin'ny iray aho fakantsary eo aloha. Noho izany dia tsy misy naoty na lavaka eo amin'ny efijery, izay ahafahanao manararaotra ny anoloana indrindra amin'io lafiny io.
Mikasika ny fepetra arahana, mpikirakira Snapdragon 855 no andrasana ao anatiny. Azontsika atao koa ny mahita fa hanana fakantsary triple aoriana izy io. Fantatra fa ny voalohany amin'ireo sensor, ny lehibe indrindra dia 48 MP. Mahita fakantsary maro karazana amin'ity karazana ity amin'ny Android isika mandritra ireo herinandro.
Ary koa, manome ny fahatsapana fa ity Redmi Pro 2 ity dia hampiditra ny sensor fantsom-tànana eo amin'ny efijery. Filokana iray izay hitantsika be dia be eo amin'ny avo indrindra amin'ny Android androany. Ho an'ny ambiny, tsy misy antsipiriany hafa navoaka momba an'io voalaza fa avo lenta amin'ny marika sinoa io. Tsy fantatsika koa hoe rahoviana no ho tonga izy io.
Noho izany, tsy maintsy miandry isika vao hahalala bebe kokoa momba ity modely ity. Tsy isalasalana fa hahaliana ny mahita ny zavatra atolotry ny Redmi Pro 2 ao anatin'ny faritra avo. Ka hanongilan-tsofina amin'ny vaovao momba ny mety hanombohana azy isika. Tokony hitranga tsy ho ela izany, na dia tsy nisy daty nomena aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sivana ilay heverina ho Redmi Pro 2 amin'ny marika sinoa
Nasiana sivana ny famolavolana ny Galaxy A90 amin'ny horonan-tsary
Aorian'ny Burner Climax, azo alaina ao amin'ny Play Store izao